I-Brand.net: Ukukhangisa kwe-Precision Geographic neDatha-Driven Display | Martech Zone
Izolo ngidle isidlo sasemini nomngani wami omuhle uTroy Bruinsma, umphathi ophumelelayo wokuthengisa nokumaketha. Eminyakeni eminingana edlule, sasisebenza emikhankasweni eqondile yeposi kaTroy ngenkathi esebenza enkampanini yezintambo. Sisebenzisa ukuhlanzwa kwedatha, idatha yamakhasimende akhe, idatha yabo yokubhaliselwe, idatha yabantu kanye ne-TON yomsebenzi… sikwazile ukuveza imininingwane kumakhasimende abo amanje futhi sabona, ngabendlu, ukuthi yimiphi imindeni ebinethuba elincane noma elincane lokubhalisela amaphakheji wekhebula noma iziteshi ezithile. Kwakuyisu elihle kakhulu!
Ushesha phambili futhi manje uTroy usebenzela yena I-Valassis, futhi bangingenisa kulokho abebesebenza ngakho ne-Brand.net. IBrand.net inesixazululo sokumaketha kwidijithali esiqukethe uhlu olungenakuqhathaniswa lwemithombo yedatha ephathelene ne-2,000 + ephathelene futhi ehlanganisiwe - ehlanganiswe kungxenyekazi eyodwa yenethiwekhi yesikhangiso.
With IBrand.net, abakhangisi banikwe amandla okufinyelela izethameli zabo ezihlosiwe ngezinga kukhwalithi yonke, ukubonisa okunomthelela ophezulu, izindawo zevidiyo nezamaselula. I-Brand.net ihlala idlula izinhloso zomkhankaso ezibaluleke kakhulu kubakhangisi bomkhiqizo, inikeze impumelelo ngokubandakanya online, ukuqwashisa nokuthenga okungaxhunyiwe kwi-inthanethi.
Uhlelo lucwengwe kangangoba ludlulela ngisho naseZikhawini Zokukhomba Ezikhangayo… izifunda ezinamakheli we-IP ezizovumela abakhangisi ukuthi bakhombise ukukhangisa ezindaweni ezihlosiwe ezincane. Njengoba uTroy echazile, lokhu kunganikeza abathengisi bezimoto ukufaka iphrofayili kumakhasimende abo futhi kubonise ukukhangisa kumasayithi afanele kuyo yonke inethiwekhi yabo yezikhangiso ikakhulukazi kubantu abaseduze nendawo abakuyo.
Hawu… zicabange nje! Inethiwekhi yokukhangisa yenzelwe ukukhomba, ukukhomba kanye nokuxhuma abakhangisi kumathemba abo amahle kakhulu.
Tags: inethiwekhi yesikhangisoizindawo ezikhomba ukukhangisaatzbrand.netkhangisaukuqondiswa kwendawogeographyi-geotargetingi-valassis
I-Ampush: Ipulatifomu Yokumaketha Komphakathi We-Facebook